ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): Platinum Hide IP v3.2.2.8 + Crack
အင်တာနက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Software
လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ IP Address ကို ဖျောက်နိုင် ၊ ပြောင်းနိုင်တဲ့ Software လေး
ပါ။ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ IP ကိုဖျောက်နိုင်ပြောင်းနိုင်ရင်တော့ ဘယ်နေရာကနေ အင်တာနက်သုံးနေလည်း
ဆိုတာကို သိဖို့ ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးနော်။ အောက်
မှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ် Crack ပါထည့်ပေးထားပါတယ်နော်။
With Platinum Hide IP, you can surf anonymously, send anonymous emails through any web based mail system, access blocked websites or forums, get protected from any website that wants to monitor your reading interests and spy upon you through your unique IP address, etc. Your identity is secure, protected, and anonymized.
Download Passwrod - pyaephyo.com
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:22 PM
Sai Thura Tun December 4, 2012 at 4:14 AM